Salmon sy Medaka, no kaody kaody amin'ny fijerena Pixel Watch | Androidsis
Mandritra ny andro mialoha ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny Vitan'i Google tamin'ny taon-dasa, izay ilay goavambe fikarohana nampiditra ny Google Pixel fahatelo, andian-tsofina maromaro nanomboka niely izay nisy resaka momba ny fahafahantsika mahita ihany koa ny smartwatch Google voalohany.
Ny vaovao mifandraika amin'ny smartwatch nataon'i Google dia teo foana, saingy mbola tsy nahita hetsika ofisialy nataon'ny orinasa mihitsy izahay manamarina azy. Farafaharatsiny mandraka ankehitriny. Ao amin'ny fidirana vaovao ao amin'ny AOSP (Android Open Source Project) anarana kaody roa no nipoitra izay mety ho fitaovana Google vaovao.
Ireo anarana ireo dia milaza fa ho smartwatches izy ireo, farafaharatsiny roa amin'ireo anarana telo aseho: Salmona sy Medaka. Ny fahatelo amin'izy ireo, Walleye, dia ho an'ny Pixel 2, izay ho tafiditra ao amin'ity lahatsoratra ity raha mila referansa. Ara-tantara Google dia nanonona ny anaran'ny Nexus sy Pixel rehetra amin'ny anaran'ny trondro na amin'ny ampahany amin'ny mampiavaka azy. Salmon sy Medaka (trondro vary Japoney) dia ohatra roa vaovao.
Tamin'ny taon-dasa dia tsaho maro no navoaka nanolotra izany Google dia niasa tamin'ny hantsam-pandehanana telo, isa izay toa nilatsaka roa tamin'ny farany. Noho ny toetran'ny famantaranandro ho toy ny akanjo, ny mpikaroka dia mety mijery endrika hafa mifanaraka amin'ny safidin'ny mpanjifa.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, Google dia nanao fifanarahana tamin'ny Vondrona Fossil hahazoana ny ampahany amin'ireo patanty novolavolainy, miaraka amin'ny ankamaroan'ny injeniera izay namolavola haitao izay tsy nisy fampahalalana manokana navoaka fa izay Mety hanova ny tontolon'ny akanjo azo araraotina araka ny ahalalantsika azy ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Salmona sy Medaka, no kaody kaody amin'ny Pixel Watch ho avy
Voamarina: Nubia dia eo am-pelatanan'ny orinasa hanangana telefaona 5G amin'ity taona ity
Nisy Redmi X iray nambara tamin'ny 15 febroary ho avy izao [Poster]